Kubulewe elinye itsha-ntliziyo eKapa – Elitsha
Kubulewe elinye itsha-ntliziyo eKapa
12th July 2017 Mandla MnyakamaIyavela, Uncategorised 0 Xhosa
Itsha-ntliziyo lezindlu u Songezo Ndude. Iphoto sinikiwe
Kwisithuba nje esingaphaya kwenyanga, kuphinde kwabulawa itsha-ntliziyo ebelisilwela umhlaba nezindlu kwisixeko sase Kapa. U Songezo Ndude waye waswelekela esibhedlele emva kokudutyulwa ngamapolisa ngexesha loqhanqalazo ebelusilwela izindlu kwindawo yogobityholo yase Imizamo Yethu e Hout Bay. Loka Ndude waswelekela e Groote Schuur emveni kokudutyulwa ngembumbulu zerabha entloko ngamapolisa ecandelo logcwangco lwamapolisa oMzantsi-Afrika. Abahlali base Imizamo Yethu bebekhalazela ukuhamba ngonyawo lonwabu kweSixeko se Kapa ukubasikela amanxiwa emva kokutsha kwamatyotyombe wabo.
Uqhanqalazo lwaye lwabanodushe emveni kokuba amapolisa esebenzise izintywizisi ngaphambi kokuba abambe iqela labo babeqhanqalazo. Ingxelo zithi imbumbulu zerabha zaye zamchana entloko loka Ndude. Ukanti elinye itsha-ntliziyo lomhlaba nezindlu u Mthunzi ‘ Ras Moziah’ Zuma waye wagwintwa ngomhla we 28 kweka Canzibe emveni kokuba bethathe ngenkani umhlaba oseKhayelitsha kwilokishi yase Kapa baze bokha amatyotyombe kuwo
Lowo utyholwa ngokubulala uZuma waye waphuma ngebheyile ye R500 kwinkundla kamantyi yase Khayelitsha http://wwmp.org.za/elitsha/2017/06/28/otyholwa-ngokubulala-itsha-ntliziyo-lomzabalazo-womhlaba-ufumene-ibheyile/
Uye wenzelwa inkonzo yesikhumbuzo loka Ndude kulempela-veki siphuma kuyo
Icawe yesikhumbuzo ibibanjelwe kwiholo loluntu ngabahlali. Iphoto ithathwe ngu Mandla Mnyakama
” Isixeko seKapa sasithembisa ukuba sizakusika amanxiwa emva kokuba sitshelwe zizindlu kwaye sakuvuyela oko, kodwa eyona nto besiyifuna yindawo yokuhlala ephangaleleyo kuba kule ndawo silinde kuyo sihlala ebigxwayibeni. Saye sangenelela uqhanqalazo emveni kokubona ukuba asimameleki. Ukusweleka kuka Songezo makubangabi yeyona ndlela ekufuneka simameleke, kodwa ke elixesha lelona kufuneke simanyane singahexi kumabango ethu. Kutheni lento kufuneka sife phambi kokuba simameleke kwizinto ezingamalungelo wethu”, ubuze ngelitshoyo omnye wenkokheli zasekuhlaleni u Lungisa Bhezile.
Ukanti omnye wabahlali u Mbuyiseli Zakumbe uye wangqinelana noka Bhezile esithi bava kabuhlungu ngokushiywa ngu Ndude kwaye eyona nto iyakuphelisa ubuhlungu kukufumana izindlu ezisemngangathweni kwaye ezinombane. ” Uxolo alizukubakhona ingengenzeki lonto, igazi lika Songezo akufunekanga liwele phantsi”, utshilo loka Zakumbe.
Ozalana no Songezo u Mkhululi Ndude uthe abazakuziphindezela koko amabango ebelwelwa ngu Songezo kufuneka baqhubeke bewalwela kuba eli tsha-ntliziyo belizinikezele kwimizabalazo yezindlu nokuphuculwa kwendawo abahlala kuyo.
Also read: Abantwana babhenela kumaqula ongqongopheleyo eKapa
U Mkhululi uye wagxeka kabukhali amapolisa ngendlela aye aziphatha ngayo eyifanisa nendlela amapolisa worhulemente omhlophe wengcinezelo ayesenza ngayo. Uthi amapolisa adubula kubaqhanqalazi ngaphandle kwesizathu ntoleyo eyabangela ukuba ulutsha luphindise ngamatye. Loka Ndude uye watyhola amapolisa ngempatho-gadalala ngexesha bebebanjwa.
” Babe sibiza ngemfene no kaffirs ngexesha babesibamba. Baye basibetha kodwa ke ngenxa yokuba kwakungekho mangqina akukho nto sinokuyenza”, utshilo u Mkhululi nogqibezele ngelithi banqwenela ukuba abo baphanda amapolisa ( Indepedent Police Directorate) baphande ukuba yeyiphi imbumbulu ethe yabulala umntakwabo.
U Sodolophu weSixeko u Patricia de Lille uye wacela abahlali base Imizamo Yethu ukuba bangayihoyi intetho yomphathiswa we ndawo zokuhlala kwiNtshona -Koloni u Bonginkosi Madikizela ngexesha ebesithi bazakususwa kulendawo bakuyo bayokulahlwa malunga ne 30km ukusuka e Hout Bay. Loka de Lille uthe ayisosigqibo sabo nabahlali eso.
Kodwa uSodolophu uthe bazukuqhubeka bebabeka ityala abo bazisikelayo amanxiwa ngaphandle komthetho okanye abame endleleni yokuba umasipala enze umsebenzi wakhe.
Indlela abulewe ngayo u Ndude ithe yakhumbuza abahlali base Imizamo Yethu ngendlela itsha-ntliziyo u Andries Tatane awabulawa ngayo ngexesha babeqhanqalazela inkonzo eziphucukileyo kurhulumente wasemakhaya. Loka Tatane ( 33) wadutyulwa ngamapolisa ngembumbulu zerabha phambi kwabendaba waze wasweleka emva kwemizuzu embalwa ngenyanga ka Tshazimpunzi kwidolophu yase Ficksburg eFreeystata ngonyaka ka 2011.
Amapolisa asixhenxe awayetyholwa ngokumphatha gadalala nokumbulala aye akhululwa yinkundla yenqila yase Ficksburg ngonyaka ka 2013.
Imizamo Yethu Hout Bay
itsha-ntliziyo lomhlaba anezindlu
Mthunzi 'Ras Moziah' Zuma
ukubulawa ngembumbulu zerabha ngamapolisa
Otyholwa ngokubulala itsha-ntliziyo lomzabalazo womhlaba ufumene ibheyile
Ayibaxolisanga ingxelo kanobhala neka nondyebo abathunywa benkomfa ye KDF
Workers uncertain about Komati power station switch-off and the just transition posted on June 16, 2022
EC health workers demand re-employment posted on April 26, 2022
Archives Select Month June 2022 (1) May 2021 (1) October 2020 (1) September 2019 (2) August 2019 (3) April 2019 (1) September 2018 (1) July 2018 (1) May 2018 (5) April 2018 (3) March 2018 (1) February 2018 (1) January 2018 (2) December 2017 (3) November 2017 (2) October 2017 (4) September 2017 (4) August 2017 (4) July 2017 (4) June 2017 (5) May 2017 (3) April 2017 (4) December 2016 (2) November 2016 (4) October 2016 (3) September 2016 (3) August 2016 (4) July 2016 (3) June 2016 (4) June 2014 (3)
Categories Select Category Editions (28) Edition 10 (2) Edition 11 (2) Edition 12 (2) Edition 13 (1) Edition 14 (4) Edition 6 (4) Edition 7 (3) Edition 8 (4) Edition 9 (4) Trial edition 2 (2) Elitsha newspaper (2) Ezasemisebenzini (8) Ezemfundo (12) Ezemidlalo (2) Ezempilo (5) Iyavela (53) Iziphaluka (54) Cape Town (43) East London (11) Oorhulemente basemakhaya (21) Uncategorised (33)